Sida loo wadaag Lugood Music Library dhexeeya Kombiyuutaro, Users iyo macruufka Devices
Ma u baahan tahay inuu ka mid kombiyuutarada, xisaab user kala duwan ama qalabka macruufka wadaagaan maktabadda music Lugood? Halkan waa in aad waxa ku socon doonaa, iyada oo dhibaatooyinkoodii oo dhan, kuwaas oo. Fiiri soo socda saddex siyaabood in ay wadaagaan maktabadda music Lugood.
Xaaladda 1: Sharing dhexeeya kombiyuutarada kala duwan Xaaladda 2: Sharing dhexeeya user kala duwan la xisaabay Xaaladda 3: Sharing maktabadda music Lugood in kasta oo qalabka macruufka
Xaaladda 1: Sharing dhexeeya kombiyuutarada kala duwan
Waa wax caadi ah haatan si aad u ogaato in ay guryahooda ugu in ay jiraan laba ama ka badan oo suurto gal ah kombiyuutarada ee hogaanka miiska ama kala duwan laptop, oo dhan network xiran oo la isticmaalayo modem la mid ah oo la xidhiidha Wi-Fi. Waa sharcidarro, in xaaladahan, si ay u wadaagaan maktabadda Lugood ah la siiyaa faylasha la wadaago waa in loo isticmaalo shakhsi kaliya. Hoos waxaa ku qoran liis ay ku qoran tilmaamo in la raaco si loo gaaro Music Sharing, oo ku salaysan dhammaan qalabka shabagga ku isticmaalaya MS Windows.
Music Sharing waa hab fudud oo u ogolaanaya booqdeen shabakad ay ku wadaagaan files music. Password A waxaa loo isticmaali karaa laakiin ma aha lagama maarmaan ah, gaar ahaan haddii ay tahay abuuray ee ujeeddo maktabadda si ay u wadaagaan oo dhan ee ay music gudahood isticmaala shabakada.
Talaabada 1: Lugood Open
Talaabada 2: Dooro Edit > aad rabtid
Talaabada 3: Riix tab Sharing ah. Suuqa ayaa hoos lagu muujiyey furmay
Talaabada 4: Dooro "Share aan maktabadda on my network deegaanka"
Talaabada 5: Haddii la doonayo, dooro "U baahan password" oo ku qortaa erayga sirta ah
Talaabada 6: Riix OK
Tallaabo 7: Halkaa marka ay marayso waxaad arki doontaa daaqad ka digay in la wadaago waa in loo isticmaalo shakhsi kaliya.
Tallaabo 8: Riix Ok ah in la ogaado in aad aqbasho xaaladan
Tallaabo 9: On qalab oo shabag kastaa, gudahood Lugood, oo waxaad arki doontaan maktabadda Lugood la wadaago oo hoos "wadaago" madax sida jaalaha ah "guri" icon darto calaamad note music ah. Qof kasta oo shabagga ku guriga isla Waa in hadda ay awoodaan si ay u arkaan oo u helaan music.
Tallaabada 10: Ogow in haddii aad dooratay "U baahan password" (5 kor ku xusan) waxaad arki doontaa qufulka icon ah. Waxaa la quful karaa iyadoo la isticmaalayo password saxda ah. Haddii aad dooratay "U baahan password" oo aan sirta ah, oo dhan waxaa lagu arki karaa waa magacaaga maktabadda
Tallaabada 11: Si aad u dhigay magacaaga maktabadda, dooran Edit > Waxa aad rabtid . Haddii aadan arki maktabadaha la wadaago, waxaad hubisaa in aad soo xulay Maktabadaha La Wadaago on tab guud
Tallaabada 12: Iyadoo ogolaansho laga yaabaa in la siiyo dadka kale ee network si ay u aragto "oo ciidankii" Lugood maktabadda waa in furan si kuwa kale ay u arkaan oo ay isticmaalaan maktabadda la wadaago iyo wax kasta oo playlists jooga
Xaaladda 2: Sharing xisaabo u dhexeeyo user kala duwan
Tani waxay noqon lahayd mid waxtar leh halkaas oo aad leedahay mid ka mid PC ama laptop la maktabadda Lugood ah in loo baahan yahay in lala wadaago dadka kale ee qaba in ay helaan qalab la mid ah laakiin u baahan in ay isticmaalaan macluumaadka login oo kala duwan. Waxa ugu horeeya ee halkan ku samaynayno waa in la joojiyo Lugood. Markaas raac tilmaamaha aadeen sida tan:
Talaabada 1: Hel folder Lugood Media. (Folder Tani waxaa laga yaabaa in loo magacaabo Lugood Music haddii aad abuuray maktabadda Lugood aad Lugood 9 ama ka hor). Waxay ku xiran tahay version of Windows waxaa laga heli doonaa in mid ka mid ah goobahaas:
Windows XP iyo Windows 2000 : \_ Documents iyo Settings \_ username \_ Documents My \_ My Music \_ Lugood
Windows Vista, Windows 7, iyo Windows 8 : \_ Users \_ username Music \_ \_ Lugood
version Windows ee Lugood ma nuqul ka dhan music aad ku dari maktabadda Lugood si aad u folder Lugood Media. Si aad nuqul ka Music ee maktabadda si aad Lugood Media Folder (haddii aad leedahay meel drive adag oo ku filan), ka soo xusho File raaciyo Library> Library> agaasimo
Talaabada 2: The folder Lugood Media waa in hadda la jiiday meel dadweynaha. Tusaalooyinka fayl dadweynaha in la isticmaali karo waa:
Windows XP iyo Windows 2000 : \_ Documents iyo Settings \_ All Users \_ Documents \_ My Music
Windows Vista, Windows 7, iyo Windows 8 : \_ Users \_ Public Public Music \_
Sida kor ku xusan, qaab-dhismeedka galka kala duwanaan karaan si goobaha soo jeediyay waa ikhtiyaar. Waxaa muhiim ah in aadan u guuri galka Lugood, faylka maktabadda Lugood, ama faylka library.xml Lugood.
Talaabada 3: Hadda fur barnaamijka Lugood ah
Talaabada 4: Guji Edit> Waxa aad rabtid
Talaabada 5: Riix Advanced
Talaabada 6: Riix badhanka Change ah
Tallaabo 7: In wada hadal ah Location Change Music Folder, maraan si aad folder Lugood Media
Tallaabo 8: Riix OK
Dhamaan tallaabooyinka kor ku xusan waxaa lagu celin karaa user kasta oo u baahan in ay la wadaagaan maktabadda music waa in
Waxaa suurto gal ah in la abuuro songs nuqul markii user kale keensada kuwan raadkaygay for, tusaale ahaan, CD marka kuwan raadkaygay, kuwaas oo hore u jirin maktabadda. Xaaladdan oo kale tus ka si fudud loo tirtiri karaa
Xaaladda 3: Sharing maktabadda music Lugood qalabka wax macruufka
Aan niraahno, tusaale ahaan, in aad doonayay in ay la wadaagaan ah music maktabadda Lugood hadda fadhiya aad PC u dhexeeya qalabka macruufka kala duwan sida iPad, iPod Touch iyo iPhone. Tani waa suurtogal iyo inaad sameyso oo dhan waa la raaco tilmaamaha ka yar oo fudud. Dhab ahaantii, la nidaamka Wi-Fi guriga wanaagsan aad qulquli karaan ka kooban dhan maktabadda qalab kale oo aan wax xidhiidh ah silig.
Home Sharing in la dhigay ilaa aad PC ugu horreeya oo dhan oo waa inaad ogaataa in version Lugood 10.2 ama ka dib waxaa loo baahan yahay haddii geeyo guul ah maktabadda waa in la gaadho. Ugu dambeeyey waa version Lugood 11 si tilmaamaha u qaadan in version ugu dambeeyay waa meel ku PC ciidanka.
Talaabada 1: Lugood Open kombuutarka
Talaabada 2: Dooro File> Sharing Home> Daar Home Sharing
Tallaabo 3: Ku qor ID Apple iyo password in si caadi ah loo isticmaalo si ay u helaan Lugood Store ah, ka dibna riix Abuur Home Share. ID Isla Apple waxaa looga baahan yahay PC iyo qalab macruufka ah labada
Marka Home Sharing u sameysan yahay ayaa ku PC aad u baahan tahay in laga dhiso qalabka kale. Tilmaamaha soo socda la xidhiidhaan samaynta qaybsiga music on iPhone5 ah:
Tubada Settings> Music
In qaybta Home Sharing, geli ID isla Apple iyo password aad soo gashay on your computer (ama kombiyuutarka) oo ka jaftaa button soo laabtay
Waxaad markaas, tusaale ahaan, ka ciyaari kara content qaybsiga guriga music ku saabsan iPhone sida soo socota:
Tubada Music > More ... > wadaago
Dooro maktabadda la wadaago
Haddii dhan u sameysan yahay ayaa si sax ah maktabadda music la wadaago waxaa laga heli karaa oo kuwan raadkaygay ama albums xulay ciyaari doonaa sida caadiga ah.
> Resource > Lugood > Saddex Siyaabaha Share Your Lugood Music Library